ZAADKA iyo Sida Tuugo ugu Dhacaan Dollarka Somaliland Yaala oo Dhan | Baarcadeeye
ZAADKA iyo Sida Tuugo ugu Dhacaan Dollarka Somaliland Yaala oo Dhan
Shirkada TELSOM oo ah mulkiilaha shirkada ZAADKA oo muddo toban sanno ku dhow si xaaraan ah uga guran jirtay dollarka Qaranka Somaliland yaala oo dhan, ayaa imika dawlada Madaxwayne Muse Bixi ka joojisay. Waxad shalay arkayseen igayoo cadho badan ka muujiyay amarka dawlada iyo in laga joojiyay lacagtii shicibka ee sida tuugada ah ay ku guran jireen.
Waxa laga yaabaa inaad is waydiiso, oo haddii shicibku lacagtooda ay u gaynayeen ZAADKA oo iyagu la doonayeen, sidee ayay ku noqotay tuugo in ZAADku ku guranayo. Ogow tuugadu maaha ta xoog wax lagaa qaado oo qudha ee waxa jirta tuugada qalinka, TELSOM arrinkeedu waa tuugada qalinka oo socotay toban sanadood oo bilaa xad ah. Waa su’aal wanaagsan runtii waa tan jawaabta su’aashaasu.
Zaadku wuxu la mid yahay aniga oo ku idhi dhamaan shicibka Somaliland dollarka ay haystaan ha noogu keenaan goobta jariidada Badhtamaha. Qofkasta oo ii keena lacagtiisa dollarka ah, waxaanu u diraynaa text message aanu ka dirayno whatsappka oo ay ku qoran tahay lacagtii aan noo dhiibatay. Markaas dukaanka tagto ee wax iibsato waxad ku odhanaysaa text message kii badhtamaha ayaan dhowr mid kaaga soo dirayaa, dukaankiina wuu ogolaanayaa. Xafiiska Badhtamaha waxa buux dhaafaya dhamaan dollarkii qaranka Somaliland yaalay, dhamaan lacagtaana waxa iska qaadanaya Badhtamaha, waayo waxaanu kaaga bedelanay text message aanu whatsappka kaaga soo diray. Ka dibna jariidada Badhtamahu waxay daaro dhaadheer ka dhisanaysaa Hargeysa, Berbera, Borama, Burco, Ceergaabo, iyo Laascaanood waayo dollarkii xafiisyada nooga buuxay ayaanu meel kasta ku dhisaynaa. Dadku lacagtooda iyaga oo la ordaya ayay noo keenaan anaguna whatsapp text message ayaanu siinaa oo kaga iibsanaa. Dhamaan shicibkuna text messagekaas ayuun bay isu dirdiraan oo wax ku kala iibsadaan.
Tuugadu maaha oo keliya marka qof si badheedh ah kuu boobo oo xoolahaaga u qaato, waa tuugo marka qofku qalinka kugu xado. ZAAD ku waxay qaranka Somaliland ku xadayeen qalinka muddo toban sanno ah. Eeda iyaga oo keliya ma laha, waayo waxay ahayd in dhamaan dawladihii waddanka soo maray ay u sameeyaan sharciyad lagu maamulo Zaadka. Qayladaa aad maqlayso ee ZAAD ka soo yeedhaysaa waa maxaa dollarkii aanu bilaashka ku guran jiray nalooga joojinayaa, TELSOM dooni mayso shillinka Somaliland inay gurato ee waxay u ooyaysaa inay maanta wayday dollarkii bilaashka ahaa ee ay dadka duhurka cad ka guranaysay. Hadaad akhrido maqaalkan oo inta aad u tagto ZAAD ka dollar kaagii ku bedelato text message, waa lagu dhacay oo waa tuugo waayo dollarkaagii waxad ku bedelatay text message systemka ZAADku soo diray.
Waddamada laga isticmaalo lacagta Zaadka oo kale ah sida Kenya iyo Uganda. Sida ay ku joojiyeen tuugada qalinka ah waxa weeye laba siyaabood. Marka hore waa la xadidaa lacagta maalintii lagu isticmaali karo Zaadka oo waxa la yidhaahdaa lacag shan boqol oo dollar u dhiganta ka badan laguma isticmaali karo maalintii (tuugadaa lagu xadidayaa), marka labaadna waxa lagu khasbay dhamaan shirkadaha Zaadka inay Bangiga dhexe dhigtaan lacag tiro le’eg lacagta shicibku ku shubtaan Zaadka, oo marka laba milyan oo Shilinka Somaliland ah lagu shubto inay shirkada Zaadku lacag ku dhowdhow laba milyan oo Shilin ay Bangiga dhexe gayso oo ku shubto si loo xadido tuugada aanu kor kaga soo sheekaynay u dhicin oo lacagtii shicibka qof shandadaha uga buuxsan. Waxaanu ku rajo waynahay in qodobadan kalena soo socdaan oo lagu fulin doono Zaadka iyo eDahab labadaba si loo maamulo sicir bararka lacagta ku wareegaysa suuqa lacagta ee Somaliland.
Waliba ayaan daradu waxa weeye shirkada Zaadka waxa laga leeyahay Muqdishu oo waxaas oo dollar ahi waxa lagu qaadaa shandado oo lagu geeyo DJibouti iyo Muqdisho. Waxan ku hambalyaynaynaa dawlada Madaxwayne Muse Bixi inay samaysay wax labadii dawladood ee ka horeeyay samayn waayeen oo ah inay ku khasbaan TELSOM inay joojiso dollarka ay tuugada shicibka Somaliland kaga guranayso. Waxan dawlada Madaxwayne Muse Biixi leeyahay wali wixii lagu joojin lahaa tuugada Zaadka wax badan baa dhiman.